Yongeza imiGangatho emitsha ngeGoogleTouchTool
Eyona ndawo iWebhu
Khu seleko kunye noBucala
I-imeyile & Imiyalezo
Iingcebiso kunye namacebo
Iingcebiso ze-Outlook & Tricks
Iingcebiso ze-Gmail kunye namacebo
Iingcebiso ze-Yahoo kunye namacebo
Izikhokelo & Izifundo
Abaqhubi kunye neQumrhu
Ukufaka & Ukuphucula
Isoftware kunye neNkqubo
IVidiyo kunye noNomsindo
Abaphequluli kunye ne-Intanethi
I-TV kunye neTesha yasekhaya
Izixhobo kunye nemipheripher
Isoftware kunye neNkqubo Mac kuphela
Yongeza imiGangatho emitsha nge- BetterTouchTool: I-Tom Mac Mac Software Picks
Yongeza Iimpawu zoBume kwiiNkcukacha zoMbane
I-BetterTouchTool mhlawumbi iyaziwa ngokuba yindlela elula yokudala imiqondiso yesintu ekusebenziseni ngeMouse Magic, i- Magic Trackpad okanye i- MacBook eyakhelwe kwi-trackpad ye-multi-touch . Isidingo salolu hlelo lokusebenza siyabonakala emva kokuqala okanye okwesibini uzama ukulungelelanisa imouse yakho okanye i-trackpad, i-Apple nje ayiniki iindawo ezininzi zokukhetha, kwaye ezo zibonelela ngekharityhulam kuphela izinto ezisisiseko zento enokuyenza ngeqela - umgca ophezulu njengesikhombisi-mboniso.
Isebenza ngeMouse Magic , Magic Trackpad kunye neMacBook Trackpad.
Isebenza kunye namagundane avamile (angabininzi-touch), i- Siri Remote , i-Apple kude, kunye neekhibhodi .
Unokujika ifowuni yakho ye-iOS kwisixhobo esikude sokukhomba kwi-Mac yakho.
Kuquka ukusebenza okungcono kwe-BetterSnapTool ukulawula indlela iifestile ezibonisa ngayo ukubonisa imida.
Umqhubi unika inkxaso kwi- OS X Mavericks nangaphambili.
Kufuneka ufunde imiyalelo yeziphumo ezilungileyo.
Kulungile, makhe siqale ngesinye seziqhelo; ngokwenene kufuneka ufunde le ncwadana ukuze ufumane okungcono kwiGootTouchTool. Akunjalo ukuba i-BetterTouchTool inzima ukuyisebenzisa; inempawu ezininzi kangangokuthi ungeke uzifumanise zonke ngokuchofoza okanye uthabathe. Ngoko ke, ukuba ufunde le ncwadana akuyona impazamo, imfuneko nje abasebenzisi abaninzi beMac abakhathazekiyo. Nangona kunjalo, kukho umqobo wangempela ngaphakathi kwincwadi; ayigqibekanga, kunye namanye amacandelo angenanto. Eyona ndlela, le ncwadana ngumsebenzi oqhubekayo, kwaye ihlazo kuba i-BetterTouchTool iyincomo ecacileyo, kodwa idinga umyalelo opheleleyo.
I-BTT (i-BetterTouchTool) inikezwa njengowokukhuphela kwiwebhsayithi yonjiniyela. Emva kokukhutshelwa, i-BTT ifuna ukufudlulelwa kwifayile yakho / yezicelo. Emva koko, vele uqalise i-BTT njengoko unokwenza nayiphi na insiza.
Enye yezikhetho zokuqala ongathanda ukuyiqwalasela ibonisa iBTT ukuba uqalise ngokuzenzekelayo nanini na ungena kwi-Mac yakho. Olu khetho lufumaneka kwiCandelo leZisiseko zoLungiselelo. Ndiyathetha nje ngoku ngenxa yokuba ukungagqibekanga akuyikuba i-BTT iqalise ngokuzenzekelayo, eyandimangalisa xa ndaya kusebenzisa i-spiffy isenzo esitsha esilandelayo xa ndiqala iMac.
I-BTT ayinayo i-interface esebenzayo xa isebenzise ngokwenene; Umsebenzi walo ukuqhuba ngasemva kwaye ulandelele imouse, ikhibhodi, kunye nomsebenzi we-trackpad ukuze ukuziphatha kwakho kunye nokulawula kwakho kungasetyenziswa kwiziphumo zakho.
Nangona kunjalo, i-BTT inomsebenzi wokusetha nokucwangciswa. Iwindow yefayile ye-BTT iyahlukana ibe ngamacandelo amaninzi, kunye nebhayibharari ephezulu, ibha yecatshulwa yokukhetha uhlobo lwefowuni odala kuyo umyalelo okanye isenzo, ibar yomgca ebonisa uluhlu olusetyenziswe kuyo, kwaye indawo ephambili yokuchaza impawu.
I-BTT ikunceda ngokusebenzisa inkqubo yokudala isenzo ngokubandakanya amanyathelo amanani aphakanyisiweyo njengoko uhamba kwinkqubo yokudala isenzo.
Uqala ngokusebenzisa ikhonkco kwithebhu ukuba ukhethe okubonisa idilesi isenzo esisetyenziswayo; Kulo mzekelo, ndiya kusebenzisa iMouse Magic . Emva kokuba ifowuni ikhethiweyo, ukhetha inqwenelo oyifunayo ukusebenzisa isenzo kuyo. Unokukhetha i-Global, eyokuvumela ukuba isenzo esitsha sisebenzise yonke indawo, okanye ungakhetha i-app ethile.
Emva kokuba ukhethe i-app, unokongeza isenzo esitsha. I-BTT iza neelayibrari enkulu yezinto ezenziwe ngaphambili. Le miqondiso ayinayo inyathelo ehlanganisiweyo kubo; Ziyimizimba nje ngokwabo, njengokungena phakathi kweMouse yakho yeMicrosoft, iqhosha lokukrola ekhoneni elingezantsi lasekhohlo lakho lomzila, okanye isiphayidi yamaninzi. Oku kuthetha ukuba ungakhetha umqondiso uze unike umsebenzi, mhlawumbi usebenzisa i-shortcutcut yomsebenzi oyifunayo ukuyisebenzisa, okanye usebenzisa uluhlu lwe-BTT lwemisebenzi equlunqwe ngaphambili, imisebenzi enzima kakhulu eyinkqubo ebanzi i-BTT ifake yona.
Awunqatshelwe kwizinto ze-BTT zangaphambili kunye nemisebenzi; unokwenza imiqondiso yakho kunye nemisebenzi yakho. Ukudala isenzo esitsha kulula njengoko ukhetha ithuluzi lokudweba kwaye udweba isenzo sakho kwindawo yomdwebo omhlophe. Unokwenza imiqondiso enzima kakhulu, kuquka i-swirls, iindidi, kunye nee-alfabhethi.
Emva kokuba udale kwaye ulondoloze isenzo, ungayibeka kwisenzo, usebenzisa indlela eqhelekileyo ye-BTT yokudala isenzo esichazwe ngasentla.
I-BTT ifaka i-window snapping; oku kufana nefestile-snapping feature efumaneka kwiinguqu ezahlukeneyo ze-Windows OS . Ngokucima ukunika amandla, ifowuni idonsela kwimida okanye kumacandelo omboniso wakho iya kufakelwa kwiinkqubo ezintsha, ezifana nokuphakanyiswa xa zihanjiswe kumgca ophezulu, zatshintshelwe kwisiqingatha sashiya xa ziqhutywe kumda osekhohlo, okanye zinciphisa ubukhulu bekota xa zihanjiswe e ngundoqo.
Ukusebenzisa ukukhethwa kweBTT, unokuchaza ubungakanani bewindow xa uhluma, imida, imibala yangemvelaphi, kunye nokunye okuninzi.
Emva kokuba usebenzisa iinqununu ze-BTT ukwenza iziganeko kunye nokwabela imisebenzi ngamnye, i-BTT iba yinkqubo yenkcazo, enye ongayibona isebenzayo xa uvula uMsebenzi woLwabiwo, kodwa, ngaphandle koko, ufihlekile.
Ngenxa yokuba i-BTT isoloko ifunyenwe nayiphi na isiganeko, ndayigcina iPCU kunye nokusebenzisa imemori ngelixa ndisebenzisa i-app. Andizange ndifumene kakhulu indlela yokusetyenziswa kweCPU okanye nayiphi na imemori yokusetyenziswa kwememori, ukumakisha nje ngokuba neprint fingerprint kakhulu kwimisebenzi kaMac.
I-BetterTouchTool yenza into enokuyilindela insiza ukuba yenze: ikunike ukulawula okungcono ekusebenziseni impawu kwiinkcukacha zakho zokukhomba ezithintekayo. Kodwa i-BTT idlulela ngaphaya kokulindelekileyo kwaye ikunika amandla okwenza iifomaththi zebhobhobhodi, sebenzisa amanqongo amaninzi ngokuthe ngempumelelo, nokuba usebenzisa idivayisi yakho ye-iOS njengendlela edeleyo yokuthinta i-Mac yakho, ifumaneka kakhulu xa usebenzisa iMac yakho. kwikhaya lezemidlalo, okanye njengenxalenye yenkqubo yenkqubo.
I-BetterTouchTool isebenzisa isakhiwo selayisenisi-mali-ufuna ntoni. Unokukhetha kwixabiso elincinci lika-3.99 ukuya kwi-$ 50.00; umcebisi uncoma intengo ye-$ 6.50 ukuya kwi-10.00. Idemo iyafumaneka.
Bona ezinye iinketho zesofthiwe kwi- Tom's Mac Software Picks .
I-Enpass Manager Manager: Tom's Mac Software Pick
Indlela yokubuyisela iingoma kwi-iTunes: Buyisela i-iTunes Backup
Indlela Yokuncedisa NgeeNgoma Iingoma zeNgoma kwi iTunes
Uqwalaselo lwenkqubo: Tom's Mac Software Pick
Ukumisela i-iTunes Allowance for Kids
I-BusyContacts: Tom's Mac Pic Software
I-Airfoil 5: I-Tom Mac Mac Software Pick
TinkerTool: Tom's Mac Software Pick
Kutheni iEksodus Wallet iyona yeyona ndlela ihamba phambili ye-Cryptocurrency Software Wallet
Entsha & Elandelayo
Indlela Yokuhlela I-Linux Crontab File To Jobs Schedule
Indlela yokuBhala imiyalezo kwi-HTML okanye kwi-Text Text
Yintoni iFayile yeFXB?
Indlela yokutshintsha iiRingtones kwi-iPhone yakho
Ukuphononongwa: IiNqwelo ezine zeMidiya zeNdlela zeNdlela zeeNdlela zeMoto
I-Sims 2: Izilwanyana eziphene ze-PS2
Yintoni iFayile ye-EPC?
I-10 ehamba phambili yeRotters kunye neLanga elide kakhulu
Phendula ngokuzenzekelayo kwimilayezo kwi-Gmail
Abathwali bezithuthi e-US
Indlela yokuLawula i-iPhone Izicwangciso zeSafari kunye noKhuseleko
Indlela yohlobo lweFrames neCSS
Hlola iNjini yeeNgcaciso Usetyenziswe kwiGoogle, Yahoo, kunye neBing
Ukusebenzisa iJumpline kwiNcwadana yoKwakha
I-Samsung: Ukusuka ku-AllShare Kuya kwi-SmartView - Ukusasazwa kweMediya elula
Yintoni i-Instagram, nantoni na?
I-Yamaha YAS-106 I-Sound Bar icacisiwe
Ukuhlalutya Ubungqina beSayithi zokuHlola zokuBamba iiWebhu
I-Adapter ye-Power Power yeCar Can Can Juice Up Yakho IWindows KwiNdlela
Iimidlalo eziPhambili zeNtsebenzo / Intambo yokuDakazela kwiPC
Indlela yokuseka iWebhu yeWebhu Page
© 2021 xh.eyewated.com